Maxaa sababay in la kordhiyo lacagta laga qaado ganacsatada | Saxil News Network
Maxaa sababay in la kordhiyo lacagta laga qaado ganacsatada
January 14, 2019 - Written by editor
Maxaa sababay in la kordhiyo lacagta laga qaado ganacsatada.
Shirkadaha ka wakiilka ah maraakiibta ayaa halmar kordhiyey lacagta laga qaado koontiinarada gaar ahaana labada nooc ee yimaada Dekeda Berbera sida koontiirka 20 fiitka iyo koontiinerka 40 fiitka ah kuwaasi lagu kordhiyey lacago aad u qaali ah oo dhibaato iyo dulsaar ku noqon doonta ganacsatada nugul ee alaabta koontiinerada ku keenta kuwaasi oo kamid yihiin dadka jilicsan ee ka ganacsada gaadiidka iyo waxyaabaha lamaid ah ah .
1 /1/2019ka ayey hal mar bilaa sabab ku kordhiyeen khidmadii koontiiner oo marka horeba xaaran ku ahayd ganacsatada maadama ay lacagtaasi kusoo bixiyeen dalka emiraadka iyo wadamada ay kasoo rarteen ganacsigood isla markaasina ay macquul ahayn in mar labaad lacag lagaga qaado Dekeda Berbera.
Wakiilad maraakiibta ee Berbera ayaa ganacsatada hore uga qaadan jiray lacag khidmad ama (service) ah taasi oo uu ganacsaha ujarijiray waraaq lagu magacaabo ( terminal Handle Discharge)taasi oo ay sharciyeysteen xafiisayda ka wakiilka maraakiibta ee lagu soo hagaajiyo waraaqaha loo yaqaano (Bil of loading ama delivery oderka DO ) ee kuu cadaynaya inaad leedahay badeecada kujirta koontiirka uu ka wakiilka yahay .
Wakiilada maraakiibta oo dhawaan khilaaf soo kala dhexgalay ganacsada leh badeecadaha ay wakiilka ka yihiin ee koontinrada ku yimaada ayaa sheegay inaanay ka laaban doonin go aankooda ay ku kordhiyeen lacagta laga qaado koontiinerada kala duwan .
Lacagta la kordhiyey oo laf jab iyo culuys aan la qaadin kari ku ah dadka badeecadah kooban udirsada wadamada kala duwan ee ku xidhan somaliland sida dubai iyo turkey oo badeecadaha ugu badan ee koontiinarada laga soo daabulo.
Lacagta la kordhiyey iyo qiimihii hore maxaa udhexeeya markaynu eegno qiimaha imika iyo kii hore koontiinerka 20 fiid iyo ka 40 fiida waa sidan .
Hore koontiinerka 20 feet = $95 imika waxaa laga dhigay 154 Dollar Faraqa korodhka = $59 dollar
Koontinerka 40 feet ah waxaa laga qaadi jiray 195.6 imika waxaa laga dhigay $354 faraqa=$ 159.6 Dollar .
Qaybinta raashiyo ahaaneed lacagtani waxaa la kordhiyey boqolkiiba boqol. waxayna kamid noqonaysaa dariiqyadii hore ee lagu kordhiyey lacagaha dahsoon ee laga qaado shicibka somaliland ee ku xidhan dekeda Berbera.
Mar aan wax ka waydiiyey Wakiilka shirkada koontiinerada Birma Axmed Cabdi ciise faas oo ahaa gudoomiyaha kumeelgaadhka ah ee shirkadaha wakiikada maraakiibta waxaa uu si cad udiiday inuu uga jawaabo suaal aan waydiiyey oo ahayd .
S- Wariye Mukhtar Axmed maxaa sababay inaad lacagtan kordhisaan ?
J- Suaashadu waa khalad waa khalad waa khalad ayuu sadex jeer igu hal celiyey isaga oo ka xun suaashan aan xaqa ug lahaa
Hadba talaabadani ayaa noqonaysa mid ay ganacsatadu marsadaan dariiqo hore oo ay ku tijaabiyeen xukuumadihii hore iyo ta maanta joogtaba oo ah inay horseedaan talaabo kasto kor uqaadaysa xariirqa ama garaafka sixiru bararka dalka aafeeyey , samaynta go ‘aamo ka madaxbaan dawlada oo lagu samaynayo dakhliyo madaxbaan oo bulshada lagu sandulaynayo sida kan maanta murankiisu cirka isku shareeray.
Wasaaraada ganacaiga somaliland iyo dekeda Somalilans ayaa hore ugu gudbiyey gudida wakiilada maraakiibta waraaqo lagu joojinayo lacagaha duksaarka ah ee ay bulshada ku kordhiyeen balse uma joojine tooda ayey marsadeen taasina waxay kaliftay in dhamaantood la xidho lama waydiiyo sababta keentay lacagaha ay kordhiyeen taasina waxay kaga jawabeen hadlo aan qancin xukuumada iyo shacabka .
Ugu danbayn dawlada somaliland xabsiga kasii daysay dhamaadkii todobaadkan shan kamid ah wakiilada shirkadaha koontiinerada Sida Shirkada Omaar’ Pirma ‘ Msc ‘SMACGM Iyo kuwo kale kadib markii ay sheegeen inay bilaabi doonaan shaqdii dekeda Berbera iyo jarista waraaqaha lagu raro badeecadaha koontiinarada kujira ee yaala dekeda Berbera oo ay hore ujoojiyeen .
Ilaa hada shacabku waxay ka dhursugayaan talaabada ay xukuumada somalilabd ka qaado wakiiladan lacaga aan jirin korodhsaday koontiinarada yimaada Dekeda Berbera.